Afaka mividy Apple Watch Aurum-Edition amin'ny vidiny 6.000 Euros | ianao izao Avy amin'ny mac aho
Aurum-Fanontana dia orinasa mpanefy volamena Okrainiana izay mivarotra fitaovana elektronika manokana, manamboatra azy ireo amin'ny volamena tena faran'izay kanto sy tranga mangirana. Ao amin'ny tranonkalany dia afaka mahita maodely marobe amin'ny iPhones ianao ary mazava ho azy, ny "Apple Watch unit" tuned "miaraka amin'ny volamena 24 karat.
Ka raha te-hikarakara ny tenanao ianao na hanao fanomezana manokana dia azonao atao ny mijanona amin'ny tranokalan'izy ireo, ary manafà iray amin'ireo Apple Watch Aurum-Edition ho an'ny vidiny ambany 6.000 Euros. Mijanona ho tompoko ianao.
Ireo izay mahatadidy ny kinova voalohany amin'ny Apple Watch dia hahatadidy ny Apple Watch Edition. Fampivoarana lafo vidy amidy any Apple mihitsy, miaraka amina casing volamena 18 karat ho an'ny casing lehibe, izay nilanja 10.000 Euros (~ $ XNUMX) teo ho eo.
Tsy mivarotra ela ny Apple Watch Edition intsony i Apple. Ireo mpanjifa manankarena izay maniry ny fanovana premium an'ny Apple Watch dia tokony hipetraka amin'ireo Hermes variants. Azonao atao koa ny mahazo Apple Watch Series 6 Gold, fa izany dia manondro ny loko volamena amin'ny tranga vy tsy misy fangarony.
Raha tena mila Apple Watch ianao volamenaAfaka mahazo izany ianao, saingy tsy avy any Apple, fa avy amin'ny orinasa antoko fahatelo izay natokana ho an'ny "tuning" fitaovana mahazatra ary manova azy ireo ho tena firavaka azo zahana ho an'ny mpampiasa vitsivitsy.
Iray amin'ireo orinasa ireo Aurum-Fanontana. Ny orinasa dia manararaotra ny famolavolana firavaka sy ny fahaizan'ny famokarana mba hamoronana kinova sy gadget vaovao ary koa kitapo sy kojakoja. Mazava ho azy fa ao anatin'izany ny iPhone 12 Pro, ary koa ny Apple Watch Series 6.
Ny Apple Watch Series 6 Aurum-Edition dia mitentina 6.000 Euros. Ny casing azy dia vita amin'ny volamena matevina Karatra 24, nosoratan'ny mpanao firavaka amin'ny firavaka. Tonga ao anaty boaty hazo manokana izy io ary eo amin'ny fehy hoditra voay.
Tsy misy afa-tsy fihenan-droa ihany: ny casing volamena dia tsy mifanaraka amin'ny tadin'ny Apple Watch, fa ny fehin-tànana lava-tanana mahazatra ihany no tohanany. Ny lafiny ratsy hafa dia noho ny firakotra volamena, ny fiasan'ny electrocardiogram. Ratsy loatra, noho izany ihany, tsy nividy azy intsony aho ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Afaka mividy Apple Watch Aurum-Edition amin'ny vidiny 6.000 Euros ianao izao
Hi-Fi amin'ny Apple Music, iMac 24 "ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho